बल्ल आउने भयो काठमाण्डौमा मेलम्चीको पानि, पहिलोपटक मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङभित्र पानी हालेर परीक्षण ! – Etajakhabar
बल्ल आउने भयो काठमाण्डौमा मेलम्चीको पानि, पहिलोपटक मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङभित्र पानी हालेर परीक्षण !
सिन्धुपाल्चोक । राजधानीबासीको पानीको प्यास मेटिने बहुचर्चीत मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अस्थाई ड्यामबाट सुरुङमा पानी हालेर परिक्षण गरिएको छ । खानेपानी मन्त्री विना मगरको उपस्थितिमा अस्थाई ड्यामबाट एक किलोमिटर सुरुङभित्र पानी हालेर परीक्षण गरिएको हो ।
काठमाडौंतर्फ पानी जाने सुरुङ बन्द गरेर आयोजनाको पहिलो अडिटमार्गबाट पानी परीक्षण सम्पन्न भएको थियो । हेलम्बु गाउँपालिका –१ अम्बाथानमा रहेको मुहान क्षेत्रबाट केही तल रहेको पहिलो अडिटमार्गको सुरुङ सम्म पानी हालेर परीक्षण गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
झण्डै एक किलोमिटर सुरुङ भित्र पानी हालेर सफलतापुर्वक परीक्षण गरिएको छ,कतै पनि समस्या भएन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्रीले भने । खानेपानी आयोजनाको ड्यामबाट आयोजनाको पहिलो अडिट मार्ग अम्बाथान सुरुङ सम्म परिक्षण गर्दा कतै पनि समस्या नदेखिएको खत्रीले जानकारी दिए । अब क्रमश अरु अडिट मार्गमा पानी हालेर परिक्षण सकिएपछि मुख्य सुरु भित्र पानी हालेर परीक्षणसम्पन्न गरिने कार्यकारी निर्देशक खत्रीले बताए ।
खानेपानी मन्त्री मगरको उपस्थितिमा सुरुङ भित्र पानी हालेर परीक्षण गर्दा सफल भएपछि मन्त्री मगर समेत खुसी भएकी थिइन् । परीक्षण सफल भएपछि मन्त्री मगरले आयोजनाका कर्मचारीहरुलाई भनिन्–‘ निर्धारीत मिति भचन्दा अगाढी नै पानी रजाधानीमा लैजानुपर्छ,काम छिटो गर्नुहोला ।’
इटालीयन कम्पनी सीएमसीले आयोजनाको ठेक्का तोडेपछि सरकारले चिनियाँ सिनो हाइड्रोलाई बाँकी कामको जिम्मा दिएको थियो । चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको कामको जिम्मा मध्ये अहिले ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र तोकिएको मिति भन्दा पहिला नै राजधानीमा पानी लैजानको लागि काम भइरहेको उनले बताए ।
‘सरकारले मेलम्ची आयोजनाको पछिल्लो भाखा दशैैको लागि तय गरेको छ । त्यो भन्दा अघि नै काठमाडौमा पानी लैजानका लागि मन्त्री ज्युले निर्देशन दिनु भएको छ’ आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक खत्रीले राजधानीसँग भने । इटालीयन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले ठेक्का तोडेपछि चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले बिगत ६ महिनादेखि आयोजनाको बाँकी काम गरिरहेको छ ।
सिनोले गएको असोजमा सुरुङको बाँकी काम गर्न ८५ करोड र एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँमा हेडवक्र्सको ठेक्का पाएको थियो । सम्झौताको मितिले दुबै काम सक्ने समयावधि १५ महिना भए पनि आयोजनाले समय अगाबै पूरा गरे ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का रकमको १० प्रतिशत रकम बोनस दिने घोषणा गरेको थियो ।
आयोजनाको ड्याम स्थलदेखि काठमाडौँको सुन्दरीजलसम्म साढे २६ किलोमिटर सुरुङको काम सम्पन्न भएको र अब चार वटा अडिटमार्गमा गेट र सुरुङ भित्र भेन्टीलेसनको काम मात्रै बाँकी रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जानकारी दिएको छ । सुरुङ निर्माणको क्रममा सामग्री लैजान र भित्रको सामन बाहिर ल्याउनका लागि सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रमा तिन र काठमाडौको सुन्दरीजल क्षेत्रमा एउटा गरी चार वटा अडिट मार्ग आयोजनामा रहेको छ । त्यसलाई बन्द गर्नका लागि गेट निर्माणको काम अहिले भइरहेको आयोजनाका निर्देशक खत्रीले बताए ।
‘आयोजनाले मुहनास्थलमा अहिले कफर ड्याम(अस्थाई) बनाएर पानी सुरुङ भित्र हाल्ने योजना बनाएको छ । बिस्तारै मुहनास्थलमा बाँध बनाएर ड्याम पनि बनाउँछौँ’, आयोजनाको निर्देशक खत्रीले भने । श्रोत राजधानी दैनिक
Posted on: Monday, March 16, 2020 Time: 21:19:05
-16667 second ago
-15952 second ago
-14481 second ago
-10273 second ago
-6883 second ago
-5981 second ago